The Legend of Shangri-La:Cluster Pays kuyinto enhle kakhulu UK Slots inthanethi game lakhiwa Ezokuzijabulisa Net. Kuyinto 6 itolitji futhi 5 imigqa slot elitholakala kwi-desktop, kumadivayisi eselula kanye tablet. Lokhu UK Slots inthanethi umdlalo has a Gameplay smooth abadlali babe ngaphansi okuyinto ukudala amaqembu okungenani 9 izimpawu ezifanayo ukuthi zibonakala nendawo noma thwi esikhundleni payline kwesokunxele kuya kwesokudla. Lokhu Online Slots Imigomo slot Umdlalo ingadlalwa nge ukubheja ubuncane £ 0,10 kanye ukubheja esiphezulu £ 200.00.
Google ukubamba out kwi omkhulu kule ngoma UK Slots Online !!
Lokhu UK Slots Online umdlalo iye evumelanisiwe phezu ezingaqondakali zaseHimalaya umbuso njengoba kuchazwe lombhali bodumo James Hilton. Zibonisa indawo fantastically yakhelwe nge langa animations nezithombe. Lokhu Online Slots Imigomo ukuvumela abadlali ukuze uthole jackpot omkhulu 10,000 izikhathi esigxotsheni zabo. I RTP kuyinto 96.59%.
I slot iqukethe 3 imifanekiso guru okuyizinto 2 ezikhundleni eziphezulu- inkawu, cat nendlovu. Nakuba ezinye izithonjana babhekwa njengabantu dragonfly onsomi, peach ezinemibala imbali, yegolide kanye butterfly oluhlaza. Futhi, oluhlaza umbuzi isenzo njengoba isithonjana zasendle futhi ngeke aguqule zibe yimiphi uphawu enikeza wenkokhelo phezulu lapho cluster kungenzeka.
Ophambili Ibhonasi Izici ukubheka-
Lokhu icushiwe ngokuthola 3, 4, 5 noma 6 lwezimpawu chitha endaweni ethile phezu itolitji. Lezi izokhuluma 2 esondweni izikhundla ngaleyo ndlela, abadlali kuphela ufuna ingxenye uphawu ngaphakathi umbono ukuze senze lokhu asebenzayo.
Manje, ezinhlanu, eziyisithupha, eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili osebenzisa free uyonikwa abadlali ngokulandelana. futhi, emva ngamunye osebenzisa phakathi ezimbili kuya kweziyisithupha imifanekiso zasendle uzobe agqoke itolitji. Lapha, ezimbili zokuqala ezibekwe phezulu ngezikhathi kodwa iyiphi anezelwe bayoqhubeka eduze ndzawonye. Futhi, abadlali uyothola 1 spin ngaphezulu, uma inani umklomelo ingaphansi 10x ukubheja Imininingwane.
Okungahleliwe Wilds / izisusi
Lokhu kungenziwa kwabangela kule UK Slots umdlalo online ngokuthola ubuncane ezimbili zezithelo ubuncane izimpawu ezine ezifanayo isisekelo umdlalo kanye wilds izokwenziwa kuya itolitji kuze lezi amaqoqo ujoyine i wenkokhelo.
Lokhu kwabangela ngokuthola amaqoqo ezimbili ezifanayo phakathi 5 futhi 8 izimpawu. Manje, abadlali ukuthola respin khulula ne amaqoqo aphethwe endaweni. Njalo ezengeziwe izimpawu ezifanayo lokubikezela sizonikeza spin kakhulu ize ibe wenkokhelo zokugcina.
Lokhu kungenzeka noma nini lapho izimpawu ezimbili chitha umhlaba phezu itolitji nomunye 1 umhlaba ngaphandle nje umbono. Nokho, ukuthi uphawu lwesithathu uzobe Kuthintwe kuze ekubukeni ukwenza kusebenze osebenzisa free.
The Legend of Shangri-La:Cluster Pays kuyinto slot kahle icanjwe. Kuhlanganisa imithetho elula nezici ibhonasi ngempumelelo. Lokhu UK Slots inthanethi umdlalo has a ukuhluka aphakathi nendawo kanye ngaleyo ndlela, omunye ungalindela ukuzuza onqobayo enkulu.